न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण ५ शनिबार | सागर श्रेष्ठ
साउन ५, काठमाडौं । माईतिघरबाट बानेश्वर सम्म भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा नेसिवसंघ र तरुण दलका आन्दोलनकारीहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा झडप भएको छ ।
प्रदर्शनकारीले प्रदेश नम्बर ३ का सामाजिक मन्त्री युवराज दुलाल चढ्ने बा १ झ ३७६३, प्रदेश नम्बर २ का सामाजिक मन्त्री किशोर शाह चढ्ने बा १ झ ७२३४ गाडी र प्रदेश नम्बर ४ की सामाजिक मन्त्री नरदेवी पुन मगर चढ्ने ग १ झ २७६ गाडी तोडफोड गरेको हो।
झडपमा डीएसपी दानबहादुर मल्ल, इन्स्पेक्टर खेम नेपालसहित १४ प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सम्बोधनको पूर्णपाठ
डा. गोविन्द केसीलाई कोरामिन दिएर भएपनि बचाउनुपर्छ, त्यो सरकारको धर्म हो । अहिले जुन सरकार आयो, यो सरकारको र प्रतिपक्षको पनि अस्ति भएको चुनावमा जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसुलभ गराउने भन्ने घोषणापत्र थियो । त्यस्तो बचन राखेर उनीहरुले चुनाव जितेका थिए ।
डाक्टर केसीले आज जे मागेका छन् तेह्र–चौध पटकको यो जुन अनसन छ, उनले जे मागेका छन् त्यो आफ्नो नीजि निम्ति मागेका हैनन् । हो, कसको निम्ति, जनताको निम्ति । तपाई हाम्रो निम्ति मागेको हो ।
देशमा एउटा आदर्श सरकारले देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य भएसम्म गरीबहरुलाई सुलभ गराउनुपर्छ । जो असक्त हुन्छ, त्यसलाई गराउनुपर्छ । यदी गरीबको जीवनस्तर सुधार्ने हो भने गरीबका छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउनुप¥यो, धनीकालाई हैन ।
डाक्टर केसीले त्यही माग्नुभएको हो, गरीबलाई शिक्षा देऊ । स्वास्थ्यमा सुलभ गराउ भनेर मागेको हो, उनको माग सबैको माग हो । अहिलेको सरकारले यसलाई बुझपचाएर नबुझेको जस्तो गरेपनि आम जनताले बुझेका छन् । जनता त्यो पक्षमा छ । त्यसैले म सरकारसँग के अनुरोध गर्दछु भने डाक्टर केसी र डाक्टर केसीका समर्थक कुनै दलका कार्यकर्ता होइनन् ।
अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ– क्यामाफ्लोज भन्ने । आफ्नो शासनको शैलीमा कहिले डाक्टर केसीलाई कांग्रेस भनेको छ, कहिले अरुलाई कांग्रेस भनेको छ, त्यो बेकार हो ।
सरकारमा बस्ने प्रत्येकले बुझेका छन् डाक्टर केसीले जनताको आवाज बोलेको छ किनभने डाक्टर केसीले जनताको लागि गरेको काम सबैले बुझेको छ । डाक्टर केसीले मरेर जाँदा यो नेपालबाट केही लादैनन् । उनी त अमरत्व प्राप्त गरेका ब्यक्ति हुन् अघि पनि भन्नुभयो संग्रौलाजीले ९उनीअघि लेखक खगेँख्र सङ्गौलाले सम्बोधन गरेका थिए० ।
त्यसैले यो बेकार छ, म कहाँसम्म माग गर्छु भने उहाँका माग पूरा हुनुपर्छ । पूरा गर्नैपर्छ । ७ पढेको, ८ पढेको, १० पढेको व्यक्तिलाई धनी बनाएर हुन्न । हुन त म आफ्नै मन्त्रीलाई गाली गर्दिन । माफिया पनि भन्दिनँ, डन पनि भन्दिनँ । अमेरिकामा बिल गेट्सले जति कमाउछन् जनतामा लगेर बाँड्छन् ।
अस्ति एउटा खेलाडीले विश्वकप जित्दाखेरी आम जनतालाई बाँडे । नेपालमा ती कमाउनेहरुले नेपाल बनाइदिएको देखाइदिनुप¥यो मलाई यो सरकारले । त्यस्ता व्यक्तिलाई किन पोस्ने रु म अहिलेको सरकारमा बसेका पढेलेखेका प्रबुद्ध ब्यक्तिलाई समाजवाद के हो रु लोकतन्त्र के हो रु प्रजातन्त्र के हो रु म सिकाउन आएको हैन ती ज्ञानी छन् यो कुराको । बुझ्नुपर्छ, समाजवाद भनेको के हो भनेर, त्यो लागू कसरी हुन्छ भनेर ।
किनभने आम जनता गरीबलाई उठायो भने समाजवाद हुन्छ । चारवटा ठेकेदारलाई मोटो बनाएर देश बन्छ रु त्यो व्यक्ति ९दुर्गा प्रसाईँ०लाई अस्ति मैले यूट्युवमा हेरेँ, केपी ओली मेरो हजुरवाउ भन्छ, कहिले काका भन्छ । घोर बेइज्जती गरिँरैछ ओलीजीको तैपनि उहाँहरु मौन हुनुहुन्छ ।
मैले मार्सी भात ख्वाकै हो भन्छ, थालमा ख्वाकै हो भन्छ । यो त लाजमान्नुपर्ने कुरा हो, त्यसैकारण म धेरै लामो बोल्दिन, मेरो भनाई यति नै हो यो आम जनता सडकमा त्यतिकै आएको हैन ।
हामी त्यसरी आएको हैनौँ । यो सरकारका बिरोधी हैनौँ, उनले भोट पाका छन् जनताबाट हामी मान्दछौँ, सरकार खसोस् भन्ने पनि हाम्रो हैन । तर सरकारले जनताले भनेको मान्नुपर्छ ।
मानेन भने अनपपुलर हुन्छ । मेरो फेरि पनि आग्रह छ, अन्यथा नलिइओस्, यसलाई पोलिटिकल भनेर क्यास गर्ने प्रयास नगरियोस्, फरक पर्छ यो सामाजिक आन्दोलन हो । यसमा डाक्टर केसीले के मागेका छन् त्यो पूरा गर्नुपर्छ । यदी पूरा भएन भने देशमा आगो बल्छ । यति भन्दै म बिदा हुन्छु ।
आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन टियर ग्यास हानिएको थियो । विस्तृतमा भिडियोमा हेर्नुहोस ।
फोटोको लागि यहाँ थिच्नुहोस ।
माइतीघर मण्डला बाट सुरु भयो बिशाल प्रर्दशन, 'ओली सरकार रगतको खोलो नबगोस' !
पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला ,कल्याण र मनिषा कोइराला सहित माइतिघरमा विशाल प्रदर्शन हुदैँ